Global Voices teny Malagasy » Zeorizia, Rosia: Tsy maharo ny siviliny ny fitondrana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 14 Aogositra 2008 21:43 GMT 1	 · Mpanoratra Veronica Khokhlova Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Rosia, Zeorzia, Ady & Fifandirana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fitantanam-pitondrana, Mpitsoa-ponenana, Vaovao Mafana, Voina, Vonjy Voina, Zon'olombelona
Vao tafaverina rehefa nihitsoka tany Zeorizia ny manao gazety Okiraniana Ihor Lutsenko – mampiasa ny anarana LJ igordaily – Ity eto ambany ity ny nosoratany tao amin'ny bolongany (UKR):
[…] Sarotra ho ahy mihitsy ny niverina. Tavela any ny mpanao gazetintsika maro, fa tsy misy ny tapakila iverenana, nefa tsy afa-manao ny asany izy ireo fa tapaka ny lalana mankany Gori.
Te-hiresaka momba ireto fitondrana roa mahafinaritra ireto aho.
Ny fitondrana Zeoriziana, noho ny antony samihafa, dia tsy nilaza tamin'ny fomba ofisialy ary amin'ny lafiny iray dia tsy sarotra ny mahita fa nilaina ny nanala ny mponina tany Gori sy ny tanàna manodidina tamin'ny toerana nisy azy.
Tsy nanampy tamin'ny fanalana ny mponina araka izay tokony natao izy. Tsy nanampy ny olo-tsotra”tia tanindrazana”, tahaka izany ihany koa ireo sahisahy mitondra fiara manofahofa ny saina Zeoriziana manodidina an'i Tbilisi, na dia ora iray monja raha mandeha fiara aza no misy ny toerana isian'ny fifandonana. Amin'izao fotoana izao ao amin'ny tanànan'i Tkviavi niaviako izay teratany no betsaka dia namono olona dimy ny mpandroba araka ny filazan'ireo monina any resahiko amin'ny sofindavitra.
Ny fitondrana Rosiana indray nandao ny terataniny any Zeorizia. Niantso vonjy tamin'ny masoivohon'i Rosia any Tbilisi ry zareo (satria naato manko ny zotram-pitaterana mivantana), fa tsy raharahany hono izany. Ataovy hoe izay ahafahanareo avy any fa ry zareo ihany koa mitady ho voadarodaroka baomba hatrany. rehefa tafaverina an-tanindrazana anefa ry zareo dia nahita ny soratra milaza fa zara raha tsy voafatotra fotsiny ry zareo [ary efa nataon'ny Zeoriziana takalon'aina aza] – na dia tsy nisy tapikan'olona niteny mafy azy ireo akory aza [na niteny ratsy azy ireo teny an-dalana].
[Ry Vladimir Putin sy Mikheil Saakashivili], Manantena aho fa indray andro any dia hadinina aminareo avokoa izao.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2008/08/14/1246/